Barack Obama: Inkokheli Ingayaleli Esihlalweni
UObama uthe lanxa ukungethembeki kubhakile umhlaba wonke ezwekazi le Africa lesisifo silibuyisela muva ngoba imali efakwa ngasese iyabe izasetshenziswa ukuthuthukiswa lelozwekazi.
UMongameli Barack Obama weMelika ugqibe uhambo lwakhe lwamazwe amabili awezwekwazi le Africa njengomongameli wakuqala walelolizwe ukwethekelela izwekazi labensundu ngokwethulela inkokheli yalelo zwekazi imbiko encoma lelizwekazi kodwa esola umkhuba wokufambathisana lokungethembeki.
UMongameli Obama uthe kuyajabulisa ukubona inani labathelelwa igcikwane le HIV lisehla esithi uhulumende wakhe ulendima ayidlalayo ekwehliseni lelinani lelobuyanga. Uphinde wathi kuyajabulisa ukubona ukuqhela kwemisebenzi yamabhizimusi ezwekazi le Africa esithi sekumele izwekazi leli lisebenzise amandla kagetsi avela elangeni lomoya.
UObama usole ele China, lanxa engalibethanga ngegama esithi lilobudlelwano bokuhuquluza inotho yamazwe eAfrica.
Kudaba olungaba beluqondiswe kunkokheli efana loMongameli Robert Mugabe uObama uthe kuyamangalisa ukuthi kulenye inkokheli eyalela esikhundleni isithi yiyo yodwa engabusa khona kugcwele abanye abanelisayo.
Engakayi kwele Ethiopia, uObama uqale ngokwethekelela kwele Kenya lapho okwadabuka khona uyise.
UChris Gande weStudio Seven usethulela loludaba ngokugcweleyo.